समाज विकासका लागि सबै क्षेत्रमा महिला पुरुषको समान सहभागिता आवश्यक- जि.सी. – ebaglung.com
समाज विकासका लागि सबै क्षेत्रमा महिला पुरुषको समान सहभागिता आवश्यक- जि.सी.
२०७३ चैत्र ३०, बुधबार ०९:०८	Top News, थप समाचार
बागलुङ, २०७३ चैत ३० । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई केन्द्रीत गरी नेकपा एमाले काठेखोला गाउँपालिका वडा नं. ८ लेखानीले मंगलवार अगुवा कार्यकर्ता भेला सम्पन्न गरेको छ ।
भेलालाई सम्बोधन गर्दै एमाले जिल्ला सचिवालय सदस्य तथा काठेखोला गाउँपालिका संगठन कमिटिका सह–संयोजक अञ्जु जि.सी.(हुमा)ले महिला लगायत पछि परेका जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन सबैलाई आव्हान गरेकी थिईन् ।
संविधानले दिएका अधिकारलाई संस्थागत गर्नका लागि निर्वाचन पहिलो कार्यभार भएको भन्दै जिसीले समाज विकासका लागि सबै क्षेत्रमा महिला पुरुषको समान सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन ।
मुलुकको आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको एजेण्डा बोकेको र राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताका पक्षमा दृढ संकल्पित नेकपा एमालेलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्न उनले सबैसंग आग्रह समेत गरिन् ।
कार्यक्रममा एमाले जिल्ला सदस्यहरु प्रेम लामिछाने र श्याम पुन, पूर्व जिल्ला सदस्य भीमबहादुर थापा, पूर्व जिल्ला सल्लाहकार प्रमानन्द कंडेल, क्षेत्रीय अध्यक्ष डिलबहादुर कार्की, क्षेत्रीय सचिवालय सदस्य हरिबहादुर कुँवर, पूर्व क्षेत्रीय सदस्य सुवास गौतम, नेकपा एमाले रेशका अध्यक्ष कृष्णबहादुर कार्की, भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन लेखानीका अध्यक्ष एकराज कंडेल लगायतले एमालेले गरेका जनपक्षीय कामको मूल्यांकन गरेर एमालेलाई सहयोग गर्न आव्हान गरेका थिए ।
कार्यक्रम नेकपा एमाले वडा कमिटि लेखानीका अध्यक्ष बेलबहादुर जिसीको अध्यक्षता, सचिव चित्रकला छन्त्याल श्रीसको सञ्चालन र आर्थिक विभाग प्रमुख मनबहादुर काउचाको स्वागतमा सम्पन्न भएको थियो ।
भेलाले आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठेखोला गाउँपालिका वडा नं. ८ लेखानीको वडा अध्यक्षमा चित्रकला छन्त्याल श्रीसलाई उमेदवारका रुपमा चयन गरेको छ । अन्य सदस्यहरु वडा संगठन कमिटिले चयन गर्ने जनाइएको छ ।
यस्तै भेलाले वडा अध्यक्ष बेलबहादुर जिसीको संयोजकत्वमा १ सय ५१ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटि गठन गरको छ । निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्ययोजना निर्माणका साथै सबै टोलहरुमा निर्वाचन परिचालन कमिटि गठन गरिएको छ ।
भेलाले एकराज कंडेलको संयोजकत्वमा भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन वडा कमिटि लेखानी गठन गरेको छ । कमिटिको सचिवमा दिनानाथ कंडेल तथा सदस्यहरुमा खिम गैरे, मनबहादुर काउचा, टेकबहादुर क्षेत्री र खेमबहादुर क्षेत्री रहेका छन् ।
यसैगरी कविन्द्र श्रेष्ठ संयोजक तथा सुरेश क्षेत्री सहसंयोजक रहेको युवा परिचालन समिति तथा भक्तबहादुर पुन संयोजक रहेको प्रचार समिति गठन गरिएको छ ।